OnePlus 5T တင်ပြချက်သည်နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်ဖြစ်သည် Androidsis
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်က OnePlus5၎င်းသည်မှတ်ချက်များကိုအများဆုံးထုတ်ပေးသောဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းထုတ်ဖော်ပြသနေသည် တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသစ်တစ်ခု။ ဒီတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလျှို့ဝှက်ချက်များကျန်ရှိနေသည်။ ရက်အနည်းငယ်စုံတွဲတစ်တွဲ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကပုံရိပ်တစ်ခုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ကိရိယာ၏။ မသိသေးသောအရာတစ်ခုရှိသော်လည်း ဖြည့်စွက်သည့်နေ့စွဲ.
OnePlus သူကနို ၀ င်ဘာလမှာဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်။ ကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖေါ်ချင်ကြဘူးပေမယ့်။ မီဒီယာအမျိုးမျိုးတွင်စက်၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ၏တတိယရက်သတ္တပတ်ကိုအလားအလာရှိသောနေ့အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်က OnePlus 5T ၏စတင်ရက်စွဲကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်.
မနေ့ကတယ်လီဖုန်းတင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်အတွက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့မြို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာမနေ့ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ် နယူးယော့။ အမေရိကန်မြို့တော်ကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျင်းပလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်ကျင်းပမည်ကိုသိရှိပြီးသည့်နောက်၊ OnePlus 5T ကိုနိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်နယူးယောက်တွင်ပြသပါမည်.
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဒေသစံတော်ချိန်နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်, 17:00 p.m. စပိန်။ မြို့တွင်းရှိနှင့်ပွဲကိုတက်ရောက်လိုသူများသည်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီပွဲကိုတက်ရောက်ရန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လက်မှတ်များကိုရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။ လက်မှတ်တွေကဒေါ်လာ ၄၀ ပါ။ OnePlus ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း။
အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ဖုန်းရောင်းချမည့်နေ့ရက်။ ဒါဟာမှဖြစ်လိမ့်မည် နိုဝင်ဘာလ 21 ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိက၌တည်၏။ အိန္ဒိယအတွက်မူနို ၀ င်ဘာ ၂၈ ရက်ဖြစ်ကာဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင်တရုတ်ရောက်ရှိမည်။ ဒါကြောင့်ဥရောပမှာအဲဒါအတွက်အချိန်ရောက်လိမ့်မယ် Black ကသောကြာနေ့.
OnePlus သည်ဤကိရိယာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖောင်းပွမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကကတိများစွာပေးသော high-end ကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်ထဲတွင်ထိုပစ္စည်း၏လက်ခံမှုကိုတွေ့ရခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါဖြည့်ဆည်းဖို့ countdown OnePlus5ယခုစတင်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus 5T ကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည်
Samsung က Apple ကိုဒေါ်လာသန်း ၁၂၀ ပေးဖို့အမိန့်ပေး